SPC Luxury Vinyl Flooring Fekitori - China SPC Luxury Vinyl Flooring Vagadziri, Vatengesi
tinya kukiya vinyl pasi
1. Anti-kutedzemuka, Anti-chakuvhe, Giredhi repamusoro anti-abrasion uye anti-bhakitiriya 2. Kutora kwezwi uye kudzikisira ruzha 3. Kukwidza-kusimba, kuchengetedza-kwakanyanya 4. Nyore kuisa 5. Yakaderera yekuchengetedza mutengo, hapana-wakisi inodiwa 6. Yakareba Hupenyu Hwose Zita Vinyl flooring (EIR SPC flooring) Ruvara rwakajairwa kara kana semasampuli ako Bhodhi ukobvu 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6mm kana yakagadzirirwa Wear layer ukobvu 0.3mm, 0.5mm, 0.7mm seyakajairika Surface Dhizaini Veneer (Hard / Softwood) zviyo, machena, dombo, kapeti. Sur ...
Chigadzirwa: Isina mvura Yemahombekombe Vinyl Matiles Plastic PVC Plank Rigid Vinyl Flooring
Stone Plastic Composite (SPC) pasi, chikamu chakasarudzika ndeyeyakaomarara musimboti wepaleti uyo unowanzo kugadzirwa neiri upfu. Izvo zvakagadzikana kupfuura echinyakare vinyl mataira. Iri dombo repurasitiki rinopesana nekuwedzera uye kudzvinyirira kwemakumi emakore uye Inoita mushe mune imwe nzvimbo hunyoro inogona kunge iri nyaya. Iyo 100% isina mvura iyo isingaruke kana kumonyanisa.
Zvakafanana neLVT flooring, solid solid vinyl flooring inogona zvakare kutaridzika sedanda kana dombo neiyo yekudhinda dhizaini uye iyo embossed yekupfeka dura inoita kuti Iwe ugone kuwana inoshamisa inoverengeka zvine mutsindo asi yakanaka pasi.
Rigid Vinyl flooring inoshanda zvakanaka zvese kumatengesi uye pekugara nzvimbo. UV yakavharwa kupfeka dura inoita kuti isagadzike nekukakwenya uye matsi pasi pekupfeka kwemazuva ese. Iine yakasarudzika yekudzvanya sisitimu uye kumucheto dhizaini, SPC vinyl mapuranga akabatana musono uye akasimba pasina glue.